Dr. Tedros oo kasoo jeeda dalka Ethiopia oo loo doortay agaasimaha guud ee cusub ee WHO - Horn Future
Dr. Tedros oo kasoo jeeda dalka Ethiopia oo loo doortay agaasimaha guud ee cusub ee WHO
Geneva(Horn Future)-Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus oo kasoo jeeda dalka Ethiopia ayaa loo doortay agaasimaha guud ee cusub ee Ururka Caafimaadka Adduunka ee (WHO) tartan ka dhacay magaaladda Geneva.
Ghebreyesus ayaa waxa uu noqon doonaa qofkii ugu horeeyaya ee Afrikan ah ee qabta hogaanka waaxda caafimaadka ee Qaramada Midoobay.
Tedros ayaa waxa uu hore u ahaa wasiirka arimaha dibadda Ethiopia sanadihii 2012 ilaa 2016 isaga oo sidoo kale ahaa wasiirka caafimaadka ee dalka intii u dhaxeysay 2005 iyo 2012.
Waxa muddadiisa 5ta sano ah ee hogaanka ururkan (WHO) uu bilaabi doonaa 1 July ee soo socota sanadkan aan ku jirno.
Ghebreyesus ayaa waxa kula tartamayay jagadan Dr. David Nabarro oo u dhashay dalka Britain waxana wareegii ugu danbeeyay doorashada uu helay 133 codad ah,halka Nabarro uu helay 50, iyadoo 2 ay ka aammustay ergooyinkii ka qayb qaatay codeeyntan.
Dr. Sania Nishtar oo ahayd musharaxa seddexaad oo u dhalatay dalka Pakistan, ayaa waxa lagu reebay wareegii u horeeyay ee tartankan.
Doorashadan ayaa waxa ay dhacday inta lagu guda jiro shirka 70aad ee Caafimaadka Adduunka kaas oo ka qabsoomay magaaladda Geneva oo socon doona ilaa 31 bishan May oo lagaga hadlayo arrimaha caafimaadka ee dunida.
Ghebreyesus ayaa waxa uu jagadan kala wareegi doonaa Dr. Margaret Chan oo u dhalatay dalka China oo iyadu haysay xilka agaasimaha guud ee WHO tan iyo 1 January, 2007.
Afhayeen u hadlay taliska Ethiopia ee uu hogaamiyo Tigreega tirada yar ayaa ku tilmaamey doorashada Ghebreyesus ee jagadan ugu sareeya inay tahay guul ay gaadhay Afrika iyo Ethiopia.
Tedros ayaa waxa lagu eedeeyay todobaadkii lasoo dhaafay in uu qariyay ilaa 3 daacuun oo shuban ah oo ka dhacay dalkiisa,Ethiopia markii uu ahaa wasiirka caafimaadka dalka.
Daacuunkan lagu eedeeyay in uu qariyay Tedros markii uu ahaa wasiirka caafimaadka ayaa waxa uu ka dhacay dalka Ethiopia sanadihii 2006, 2009 iyo 2011 sida ay qortay warbaahinta caalamku.
« Hurdada habeenkii waxa ay kordhisaa quruxda wajiga iyo soo jiidashadiisa	» Maraykanka oo ka digay gantaalaha nuclear ka ee iskaga gudba qaaradaha ee Kuuriyada Waqooyi